I-Sony Xperia Z3 namanye ama-smartphones amaningi azosala ngaphandle kwe-Android 7.0 Nougat | Izindaba zamagajethi
ISony Xperia Z3 namanye ama-smartphones amaningi azosala ngaphandle kwe-Android 7.0 Nougat
IGoogle isivele yethule ngokusemthethweni uhlobo olusha lohlelo lokusebenza lwe-Android, olwaziwa ngeNougat, okuyisikhombisa kulokho esikubonile kusukela le software yethulwa okokuqala. Ezinsukwini zokugcina besifunda ngamasu wokuvuselela abanye abakhiqizi, okuhlala njalo kuhamba kancane, futhi sesiqale ukwazi ukuthi Amadivayisi eselula noma amaphilisi ngeke athole i-Android 7.0 Nougat ration yabo nganoma yisiphi isikhathi.
Uhlu lwamadivayisi angeke lukwazi ukubuyekezelwa enguqulweni entsha ye-Android lude, kepha noma kunjalo kukho konke lokho uhlu olulodwa lubonisa ukudlula okunye futhi okuzosivumela ukuthi sichaze izinto eziningi. Sikhuluma ngakho Sony Xperia Z3, eyayithole ukubuka kuqala kokuqala konjiniyela, futhi ekugcineni izosala ngaphandle kokuthola inguqulo yokugcina ye-Android Nougat. Sizokwazi izizathu ezikule ndatshana, ezizodalula futhi ezizosivumela ukuthi sazi amanye amatheminali amaningi azokwazi nokubuyekezela enguqulweni yakamuva yohlelo lokusebenza lweGoogle.
1 Yiziphi izizathu ezenza ukuthi iSony Xperia Z3 ingatholi i-Android Nougat?
2 Umsuka wenkinga
3 Ikusasa (elimnyama) le-Android 7.0 Nougat
Yiziphi izizathu ezenza ukuthi iSony Xperia Z3 ingatholi i-Android Nougat?
Okwamanje azikho izizathu ezisemthethweni ezaziwa ngokungavuselelwa kweSony Xperioa Z3 ku-Android 7.0 Nougat, enikezwe ngabakwaSony, kodwa esikwaziyo yizizathu ezinikezwe ngu-Ola Olsson noZingo Andersen, abaphathi bephrojekthi ye-Sony's concept projekthi eyenza ukuthuthukisa i-Sony Xperia Z3 ne-Xperia Z3 Compact ngokuya ngombono wabasebenzisi.
Lezi zizathu ziphathelene ikakhulukazi nesigaba sobuchwepheshe kanye nesigaba sezomthetho. Futhi ukuthi bobabili i-Sony Xperia Z3 ne-Sony Xperia Z3 Compact ifaka iprosesa ngaphakathi I-Qualcomm Snapdragon 801, engasasekelwa ngokusemthethweni yi-Android AOSP, ngakho-ke ayihlangabezani nengxenye ebalulekile yezidingo ukuze ikwazi ukubuyekeza ngokusemthethweni ibe yinguqulo entsha ye-Android.
Uma sibheka amanye amatheminali emakethe, sithola ukuthi inani elihle lamadivayisi likhuphuka zombili i-Qualcomm Snapdragon 801 kanye neprosesa engu-800, nayo ethintekile. Kulolu hlu lwama-smartphones sithola okulandelayo; I-Lenovo ZUK Z1, i-OnePlus X, i-Xiaomi Mi Inothi, i-ZTE Axon ne-ZTE Grand S3.
Njengoba ufundile, noma iyiphi idivayisi eneprosesa yeQualcomm Snapdragon 801 noma iQualcomm Snapdragon 800 ngeke ikwazi ukuthola ngokusemthethweni i-Android 7.0 Nougat futhi abashayeli abadingekayo ukuze lama processor amabili asebenze ngenguqulo entsha ye-Android basusiwe kukhodi ye uhlelo. Lokhu ngeke kusho ukuthi awukwazi ukuthola isoftware entsha ngendlela esemthethweni, ngoba noma yimuphi umsebenzisi angabeka labo bashayeli ngendlela ecishe ibe lula, kepha ikushiya ngaphandle kokuthola i-Android 7.0 ngokusemthethweni.
Inkinga ukuthi akuyona yonke into elula njengoba ibonakala, futhi lokho ukuthi uma kungathathi okungaphezulu kokufaka abashayeli abambalwa, noma yimuphi umkhiqizi angabafaka, enze ukuguqulwa okufana nalokho abakwenzayo kumaROM abo. Kodwa-ke, kufanele kuhlangatshezwane nezimo eziningi ukuze zikwazi ukuletha i-Android 7.0 kudivayisi noma ithebhulethi ephathekayo.
Noma yimuphi umkhiqizi ofuna ukufinyelela kuma-Google Aps, esinye sezici ezinhle ze-Android, ukuthi kufanele athobele imigomo ye-Google CTS. Lokhu cishe kuyizidingo, ezinye zazo ezobuchwepheshe, okufanele zifezwe yidivayisi ngayinye ukuze ifinyelele kuma-Google Aps.
Ngaphezu kwalokho, iGoogle nayo idinga ukuthi amadivayisi abe iyahambisana ne-OpenGL ES 3.1 noma i-Vulkan graphics API. Ukuxhuma amachashazi siwafinyelela kuma-GPU angahambisani nama-API emidwebo futhi phakathi kwawo sithola wonke umndeni we-Adreno 300, Mali-400 noma iMediatek, okusishiya nohlu olude lwamatheminali namuhla abengathola ngokugcwele isibuyekezo ku-Android 7.0 INougat.
Ngaphezu kwalokho, umndeni wakwa-Adreno 300 awuyisekeli i-OpenGL 3.1 ngenxa yemikhawulo yezobuchwepheshe, kanti umndeni waseMali-400 usekela i-OpenGL 2.0 kuphela.
Lapha sikukhombisa okude uhlu lwamadivayisi eselula namuhla angahlangabezani nezidingo ezicelwe i-Google ngakho-ke azange zibuyekezelwe i-Android 7.0 Nouga entshat;
I-Samsung: I-Galaxy J Max, i-Galaxy J2 (2016), i-Galaxy J2 Pro (2016), i-Galaxy J3 (2016), i-Galaxy Tab J, i-Galaxy J1, i-Galaxy K1 Nxt, i-Galaxy J1 (2016), i-Galaxy J5, i-Galaxy J5 (2016), i-Galaxy I-A3 (2016), i-Galaxy On7, i-Galaxy On7 Pro, i-Galaxy E5, i-Galaxy Grand Max, i-Galaxy S4 mini
Bq: I-Aquaris X5, i-Aquaris E5s
Asus: IZenfone Max, iZenfone 2 Laser, iZenfone Go, Bukhoma
Samsung: IMoto G (3rd Gen), iMoto E (2nd Gen), iMoto G4 Play, iMoto G (2nd Gen, 4G)
I-Xiaomi: I-Redmi 2, iRedmi 2 Prime, iRedmi 2 Pro, iRedmi Note Prime, iMi Note
I-Lenovo: I-ZUK Z1, A6000, A6000 Plus, A6010, A6010 Plus, Phab, A1000, A5000, Vibe A, A1900
I-OnePlus: OnePlus X
I-LG: I-K10, G4 Stylus, Stylus 2, X Screen, X Style, K7, K4, Leon, G Stylo, Stylo 2, Spirit, G4c, Zero, K3, AKA, Tribute 2, Joy, K7, Magna, K5, Ray
IHuawei: Y6, Y625. I-Y635, i-SnapTo, i-P8 Lite, i-Y5II, i-Y3II, i-Honor 4C, i-Honor 5A, i-Y360, i-Honor Bee, i-Ascend Y540
Alcatel: I-Pixi 4 (6) Pixi 4 (4), Pixi 3 (5.5), Pixi 3 (4.5), Pixi 3 (3.5), Pixi 3 (4), Pop 4, Pop Star, Idol 3 (4.7), Fierce XL, Hamba uyodlala
I-Acer: Liquid Z220, Liquid Z320, Liquid Z330, Liquid Z520, Liquid Zest
I-Sony: I-Xperia E4, i-Xperia Z3, i-Xperia Z3 Compact
Ikusasa (elimnyama) le-Android 7.0 Nougat
Akungabazeki ukuthi ikusasa libukeka limnyama kakhulu ku-Android 7.0 Nougat, ngemuva kwezidingo ezinzima ezifunwa yiGoogle kubakhiqizi nakwimishini yabo. Uma i-giant search ingabheki isisombululo kulezi zinkinga esixoxe ngazo isiyonke, ingqikithi yamatheminali ahlukene angama-432 ngeke athole i-Android Nougat, yetfulwa ngalokusemtsetfweni nga-2015 na-2016.
Sikhuluma ukuthi cishe ama-50% ama-smartphones athulwe ezikhathini zamuva ngeke athole inguqulo entsha ye-Android, yize iningi lalawa madivayisi liphakathi nendawo noma liphansi.
Ingabe idivayisi yakho yeselula ikuluhlu lwamatheminali we-Android angeke athole inguqulo entsha yohlelo lokusebenza olwenziwe i-Google?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » ISony Xperia Z3 namanye ama-smartphones amaningi azosala ngaphandle kwe-Android 7.0 Nougat
ne-HTC One M8 izohlala uma uNougat: '(
IMIT ithola ukuthi ungaphindaphindeka kanjani nge-10 ijubane le-WiFi
AbakwaSamsung bangaba nezinkinga ngesitoko se-Samsung Galaxy Note 7